Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. बच्चालाई सानैदेखि सिकाउनुपर्ने १० कुराहरू(एक पल्ट अवश्य हेरी सेयर गरौं) – Janata Live
बच्चालाई सानैदेखि सिकाउनुपर्ने १० कुराहरू(एक पल्ट अवश्य हेरी सेयर गरौं)
‘नानीदेखि लागेको बानी’ अर्थात बच्चा बेलादेखि लागेको बानी छुट्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफ्नो बालबच्चाहरुलाई सानैदेखि राम्रो कुरा सिकाउन जरुरी छ । जसले गर्दा बच्चालाई राम्रो मानिस बन्नको लागि मद्दत गर्छ । बच्चालाई राम्रो बानी सिकाउने जिम्मेवारी आमाबुबा र अभिभावकको हो । कतिपय कुराहरु बच्चा आफैले भोगेर सिक्छन् । कतिपय कुराहरु आमाबुवाले नै सिकाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कुरा ठूलो भएपछि आफै सिक्छन् तर केहि यस्ता बानी हुन्छन जुन बच्चामै सिकाउनुपर्छ ।
ठुलाको कुरा मान्नु
आफ्नो बिचार कमेन्ट गर्नुहोस।
कविताः ढुंगा र ईश्वर
भिर पाखा खोल्सी खोला ऐलानी जग्गाहरुमा ढुंगा राखे र मानिसहरुले मलाई ईश्वर भनिदिए बुद्ध भनिदिए अल्लाह भनिदिए क्राईस्ट …. भनिदिए...
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा...
काठमाडौं – पछिल्लो समय विवाहका लागि लागि विभिन्न माध्यमहरुमार्फत विज्ञापन दिने गरिएको छ । अहिले अनलाइनमार्फत पनि यस्ता कामहरु भइरहेका...
नमस्ते ! मेरो नाम उज्वल हो। म नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधार्न नेपालीहरुलाई संगठित गर्दैछु र यसको लागि...